allsanaag.com - Culusoow oo lagu mudaharaadi doono
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3207	Days	00	Hours	30	Minutes	23	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Culusoow oo lagu mudaharaadi doono
Written by khalid	Mudaharaad ka dhan ah madaxwayne Xasan Culusoow oo ka dhici doona London.
Ummadda Soomaaliyeed ee nabada jecel waxaa lala socodsiinayaa in ururka Sahal iyo jaaliyada UK ay wada dhigi doonaan mudaharaad looga soo horjeedo qaabka hogaanka uu dalka ku wado madaxwayne Xasan Shiikh. Jaaliyaddu waxay aad uga xun tahay siyaasaddaha guracan xun ee uu la soo baxay Xasan Sheekh, taasoo jaaliyada UK ay ka cabsi qabto in dalka uu galiyo markale dagaal sokeeye.
Ujeedada mudaharaadku waa inaan muujino inaan kasoo horjeedno ku dhaqan la’aanta dastuurka fadaraaliga ah, hantida iyo guryaha ee Muqdishu lagu haysto ilaa 1991, qaadista cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya, iyo farogalinta ay dawladu ku hayso maamul u samaynta gobolada Jubbooyinka, iyo xadgudubka, caburinta lagu hayo suxufiyiinta ka hawlgasha Muqdisho. Mudaharaadka waxaa lagu qaban doonaa goobta iyo waqtiga soo socda:
Saacada: 3:30 ilaa 6.30pm
Barta kulanka ka hor mudahaaradka: St James’s Square
Goobta mudaharaadka: Chatham House, London, SW1Y 4LE
Wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir taleefanada hoose ku qoran:
Fiiro gaar ah: Fadlan soo qaadata dharka qaboobaha oo usoo diyaargarow inaad dibada u taagnaato badbaadinta dadkaaga, dalkaaga iyo damiirkaaga.
Waxaa imaan doona warbaahinta noocyadeeda kala duwan ha moogaan oo ha ka maqnaan mudaharaadkan oo noqon doona mid taariikhi ah insha Allah.
Mudaharaadkii Maraykanka looga soo horjeeday Xasan Culusoow